Ukuhlanganisa Amacebo Okukhulisa Ukubandakanya Kwakho I-imeyili Martech Zone
I-imeyili isizibophezele ekumaketheni kusukela ekuqaleni kwepulatifomu. Lapho “i-imeyili ephathekayo” yake yabonisa ukuthunyelwa kweposi ngesimo nokusebenza, ukusebenza kwepulatifomu kusho ukuthi umyalezo ngamunye kufanele ube ngowomuntu siqu, uvumelane nezimo futhi uhlanganyele nezethameli ezahlukahlukene.
Kulo nyaka, abathengisi kudingeka bayeke ukucubungula ubuchwepheshe be-imeyili namasu njengamathuluzi azimele wodwa, kepha njengezingxenye zepuzzle enkulu, ehehayo. Ukwenza kanjalo kuzovumela abathengisi ukuthi babe nobuciko, benze izinto ezintsha futhi bahlakaniphe ngezindlela zabo ze-imeyili. Nawa amaqhinga ambalwa ongawajwayela nokuthi ungawahlanganisa kanjani ukuze uzibandakanye kakhudlwana.
Ukuhlanganisa okuqukethwe okunamandla nokuhlangana kwe-mega
Lapho nishade ndawonye, ​​ukuhlangana kwe-mega nokuboniswa kokuqukethwe okunamandla kuyizithandani ezinamandla. Kusetshenziswa ukuhlangana kwe-mega nokuboniswa kokuqukethwe okunamandla, abathengisi be-imeyili bangakha imilayezo eyenziwe yaba ngeyakho kumuntu obhalisile ngamunye ohlukile. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani.
Ukuhlangana kwe-Mega - Besebenzisa ukuhlangana kwe-mega, abathengisi bangadonsela imininingwane yabantu kanye nomlando kokuqukethwe kwe-imeyili. Sithole ukuthi lapho kukhulunywa kaningi ngegama lomthengi, i-imeyili iphumelela kakhulu. "Othandekayo [igama]" akasenele. Ngokuhlangana kwe-mega, abathengisi bangenza ngezifiso igama, indawo noma ezinye izici zedemokhrasi ukwenza i-imeyili ibe ngeyakho ngokuzenzakalela. Lokhu kunenzuzo eyengeziwe yokuqondisa amehlo omfundi lapho ufuna khona ngegama lomfundi noma eminye imininingwane ehlanganisiwe.
Ukuboniswa kokuqukethwe okunamandla - Yonke imininingwane yabathengi edonselwe ekuhlanganisweni kwe-mega ingahle ihlanganiswe ne-imeyili lapho ifunwa futhi iguqulelwe kumbhalisi ngamunye we-imeyili oyingqayizivele. Njengoba igama lisho, okuqukethwe okuguqukayo kuyashintsha ngokuya ngokufaka. Amavidiyo wokuqukethwe ashukumisayo aphumelela kakhulu noma ama-slides afaka imininingwane ehlanganisiwe.
Isibonelo, enkampanini enkulu yokungenisa izihambi muva nje Unyaka ekubuyekezweni i-imeyili, inkampani idonse amagama abanikazi bemivuzo, mangaki amahhotela - kanye nendawo - abanikazi bemiklomelo ethile abahlala lapho, kanye namahhotela anconywayo nezindawo ezisuselwa kumlando wokuhlala. Okuqukethwe okuhlanganisiwe kwe-mega kushintshiwe ngokuya ngekheli le-imeyili. Ngakho-ke abekho abantu ababili abathola i-imeyili efanayo - ophethe imivuzo ngamunye uthole ividiyo eyingqayizivele eyenzelwe amava abo.
Ezinye izici ezibalulekile zihlanganisiwe
Ukumaketha kwe-imeyili ehlakaniphile akugcini ngomshado wokuhlanganiswa kwe-mega nokuqukethwe okunamandla. Abathengisi bangakhulisa ukumaketha kwabo nge-imeyili ngokuhlanganisa amaqhinga wendabuko nobuchwepheshe obusha.
Izakhiwo ze-hybrid ezilahlekile zeselula - Ama-imeyili asebenza kahle kakhulu azovumela okuqukethwe ukujwayela lapho umthengi evula khona i-imeyili (ifoni, ideskithophu, njll.), Futhi abe nezinga eliphakeme lokuchofoza ukuze uvule ngamaphesenti angama-21. Kepha ukwakheka okuphendulayo akuyona into entsha futhi abathengisi bangayithatha isinyathelo esisodwa ngokuqhubeka nge ukwakheka kwe-hybrid okungashabalali enikeza ukwakheka okukodwa kwezikrini ezinkulu nezincane ngokufanayo. Ingxenye ehamba phambili ngokuhlelwa? Ifundeka ngamaphesenti ayi-100 futhi ayidingi abasebenzisi ukuthi basondeze noma banciphise. Empeleni, lokhu kungumbono ophendulayo owenziwe kahle.
Izingcaphuno zomphakathi - I-imeyili yinhle, kepha inamandla uma ihlanganiswa nemithombo yezokuxhumana. Abakhangisi bangakhulisa imizamo yabo yokuthengisa ye-imeyili ngokusebenzisa izingcaphuno zenhlalo - Okuqukethwe kwezenhlalo (njengama-tweets, izithombe noma ukuphawula) okudonselwa ngqo kumyalezo we-imeyili. Lokhu kunikeza ngezibuyekezo zesikhathi sangempela zokuphendula kwabathengi kuya kumkhiqizo, futhi kuyindlela enhle yokubandakanya izethameli ze-imeyili.
Ngokufaka izingcaphuno zomphakathi kwi-imeyili, ama-brand angakhuthaza ababhalisile ukuthi babelane ngamadili, okuzovumela abathengisi ukuthi balandelele abameli bezinhlobo zezimpawu futhi bahlele amadili azayo kulabo bantu abanomthelela.
Iphesenti elingu-100 elifundekayo nemifanekiso icishiwe - Ngonyaka odlule, iGoogle ithole lokho imiphumela yokuvimba isithombe ama-imeyili angamaphesenti angama-43, inselele abathengisi ukuxhumana nabathengi ngokushesha futhi kungcolise ukubukeka kwe-imeyili. Kodwa-ke, ukufaka izithombe nokuqukethwe ngobuchwepheshe obusha kuvumela ama-brand ukuthi axhumane nabathengi bawo, ngaphandle kwezilungiselelo zawo ze-imeyili.
Amaphesenti ayikhulu afundekayo nemifanekiso ivaliwe aqinisekisa ukuthi wonke umbhalo uyaboniswa futhi uyafundeka, noma ngabe izithombe zilayishiwe noma cha, okuvumela imikhiqizo ukuthi yenze umxhwele ngama-imeyili ayo futhi ixhumane nomyalezo wayo ngendlela efanele.
Okuqukethwe okunamathelayo - Ama-imeyili wokuphromotha nawokuthengisa abalulekile ekwandiseni imali engenayo, kepha aqina uma ebhangqwe nokunamathelayo - imiyalezo ethunyelwa kokuqukethwe engathengisi ngqo kobhalisile, kepha kunalokho ithumela imiyalezo ethokozisayo nefanele (imibuzo, amathiphu, njll.). Lolu hlobo lokuqukethwe kwandisa i-imeyili kuvulwa ngamaphesenti ayi-12-24.
Abathengi abahlale besesimweni sokuthenga, futhi ngenxa yalokho, abafuni ama-imeyili wokuphromotha. Ngokwenza ubuwena ama-imeyili ngokususelwa kumjikelezo wempilo womthengi, abathengisi bangagcina izingxenye ezithile zibandakanyekile baze bakulungele ukuthenga futhi.
Imikhankaso emikhulu yokuthengisa ngama-imeyili kufanele ihambise imiphumela efana nokuchofoza okwandisiwe, ukuvula nokuthenga. Ukuhlanganisa ubuchwepheshe namasu, abathengisi be-imeyili bangathumela imiyalezo ebamba iqhaza kahle ukudlula izinhloso zabo zokumaketha. Ukubona eminye yemikhiqizo emisha yokukhangisa ngama-imeyili, hlola kulo nyaka I-imeyili Design Lookbook evela ku-Yesmail.
Tags: okuqukethwe okunamandlaukuzibandakanya kwe-imeyilii-imeyili image alt tagsizithombe ze-imeyiliimeyili Marketingimeyili socialisakhiwo se-hybridukuvimba isithombeukuhlangana kwe-megaukwakheka kwe-imeyili yeselulaukwakheka kweselulaisilinganiso esivulekileukwakheka kwe-imeyili okungashabalaliizingcaphuno zenhlalookuqukethwe okunamathelayoyebo
Iphayona lokwakhiwa kwe-imeyili kusukela ngo-1999, ungumsunguli we YeboIqembu le-Creative Services eliwine imiklomelo (amaklayenti afaka phakathi i-HP, Coca-Cola, At & T, eBay, Kodak, Microsoft, Intel, Warner Bros nezinye eziningi). UMatthew uthole iBachelor's Degree in Marketing e-Indiana University wafunda i-Art / Graphic Design e-The Pacific Northwest College of Art nase-Oregon College of Art & Craft. UMatthew wayekade enguMqondisi weCreative weTrustustMaster, Labtech, Logitech kanye @Once.
Izizathu Ezi-7 Okuqukethwe Kwakho Kwehluleka Ukuhambisana Neminyaka Eyinkulungwane